Ny fo vaovao - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-02 > Ny fo vaovao
Ilay mpivarotra anana 53 taona Louis Washkansky no olona voalohany teto an-tany niaina niaraka tamin'ny fo hafahafa tao an-tratrany. Nodidiana nandritra ny ora maromaro i Christiaan Barnard sy ny ekipa mpandidy 30 mahery. Ny harivan'ny 2. Desambra 1967, Denise Ann Darvall, mpiasan'ny banky 25 taona, dia nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana. Naratra mafy tao amin’ny atidohany izy taorian’ny lozam-pifamoivoizana. Neken'ny rainy ny fanomezana fo ary nentina tany amin'ny efitrano fandidiana i Louis Washkansky ho amin'ny famindrana fo voalohany eran-tany. Nametraka taova vaovao tao aminy i Barnard sy ny ekipany. Taorian’ny fahavoazan’ny herinaratra dia nanomboka nitempo tao an-tratrany ny fon’ilay tovovavy. Tamin’ny 6.13 ora sy minitra vao vita ny fandidiana ary tonga lafatra ny fahatsapana.
Ity tantara mahagaga ity dia nampahatsiahy ahy ny fifindran'ny foko. Na dia tsy nanao “transplantation fo physique” aza aho, isika rehetra izay manara-dia an’i Kristy dia efa niaina dikan-teny ara-panahy momba izany. Ny zava-misy habibiana amin’ny maha mpanota antsika dia ny fahafatesana ara-panahy ihany no mety hiafarany. Hoy i Jeremia mpaminany: “Ny fo dia sahisahy sy kivy; iza no mahafantatra izany? (Jeremia 17,9).
Noho ny zava-misy ao amin'ny "toetry ny ara-panahy" dia mety ho sarotra ny hananana fanantenana. Amin'ny tenantsika manokana dia misy ny ain'ny fivelomana. Mahagaga fa i Jesosy dia manolotra antsika tokana mety hahazoana fiainana ara-panahy.
“Tiako ny homeko fo vaovao sy fanahy vaovao ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo ianareo” (Ezekiela 3.6,26).
Famindrana fo? Mipetraka foana ny fanontaniana hoe: iza no manome ny fony? Ny fo vaovao tian’Andriamanitra hapetraka ao amintsika dia tsy avy amin’ny lozam-pifamoivoizana. Izany no fon’i Jesosy Kristy Zanany. Ny apostoly Paoly dia mamaritra io fanomezana nomena maimaim-poana avy amin’i Kristy io ho fanavaozana ny maha-olombelona antsika, ny fiovan’ny fanahintsika ary ny fanafahana ny sitrapontsika. Amin’ny alalan’io famonjena mifono zava-miafina rehetra io, dia atolotra antsika ny fahafahana mahagaga hanakalo ny fontsika taloha sy maty ho an’ny fony vaovao sy salama. Fo feno fitiavana sy fiainana mandrakizay. Manazava toy izao i Paoly: “Fantatsika fa ny toetrantsika taloha dia niara-nofantsihana taminy tamin’ny hazo fijaliana mba ho simba ny tenan’ny ota, mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay maty dia afaka amin'ny ota. Fa rehefa niara-maty tamin’i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa” (Romana 6,6- iray).
Andriamanitra dia nanana fifanakalozana mahafinaritra an'i Jesosy mba hahafahanao miaina fiainana vaovao ao aminy, hanana firaisana aminy ary handray anjara amin'ny fiarahana amin'ny Ray ao amin'ny Fanahy Masina.
Andriamanitra mametraka ny fonao vaovao ary mamelona anao amin'ny fanahy vaovao, zanany. Ianao irery no ahazoana fiainana amin'ny alàlan'ny fahasoavana sy ny famindram-pon'i Jesosy Kristy Mpamonjy sy Mpanavotra!